လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Zayn နဲ့ Gigi ???
On March 14, 2018 April 9, 2018 By fairy
လူတိုင်းအားကျရလောက်အောင် ချစ်နေခဲ့ကြတဲ့ Zayn နဲ့ Gigi တို့ဟာ လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဖက်လုံးက အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ ?
နှစ်နှစ်ကျော်လက်တွဲခဲ့ကြပြီး relationship goal ပေါင်းများစွာနဲ့ အတွဲတကာရဲ့ idol ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ဒီမနက်မှာပဲ (၁၄.၃.၂၀၁၈) နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ social midea တွေကတဆင့် ကြေညာခဲ့ကြတာပါ။ (အသည်းတွေကွဲချက်ဖဲ အက်မင်ကတော့ ? )
နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့ မချစ်ကြတော့လို့မဟုတ်ပဲ ဆက်ပြီးလက်တွဲသွားဖို့ မဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလို့လမ်းခွဲရတာလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ Zaynကတော့ Gigi နဲ့လက်တွဲခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာ ချစ်သူလို သူငယ်ချင်းလေးလို လေးစားမြတ်နိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး တကယ့်ကိုဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေအပြည့်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ အခုလိုခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာကို ပရိသတ်တွေနားလည်ပေးစေချင်ကြောင်းပြောထားခဲ့ပါတယ်။
Gigi လေးကလဲ Zayn နဲ့အတူမျှဝေခဲ့တဲ့ အချစ်တွေအချိန်တွေနဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေအတွက် အမြဲတမ်းကျေနပ်ကျေးဇူးတင်နေမယ်….သူငယ်ချင်းတွေလိုအမြဲတမ်း နေသွားကြမယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင် အက်မင့်ကို heart ထိစေတဲ့စကားလေးကတော့
I want nothing but the best for him …………❤As for the future, whatever’s meant to be will always to be.
နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ fan တွေကတော့ social media ပေါ်မှာအပြတ်အသတ်အသည်းတွေကွဲနေကြပြီး သတင်းတိုင်းမှာလဲ သူတို့အကြောင်းတွေပလူပျံနေတော့မှာပါ……..
ပြန်တွဲဖြစ်ကြဖို့လဲ ဆုတောင်းပေးနေသလို ပြန်မတွဲဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက အချိန်တွေကြာတဲ့ထိ လူတိုင်းပြန်ပြောနေရမယ့် ချစ်ပုံပြင်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေတော့မှာပါ………….
Music Newsbreak up
PREVIOUS POST Previous post: Delicate က Kenzo ရေမွှေးကြော်ငြာကို copy လုပ်ထားတယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ Taylor Swift
NEXT POST Next post: အချိန်တိုအတွင်း`Real-time Charts´ မှာ နံပါတ်”တစ်”ရခဲ့တဲ့ Bigbang ရဲ့”Flower Road”